Ngo-2008, e-Russia yaqala iphrojekthi, sibonga ngalo idiploma bazokwazi ukuthola amakhulu ezinkulungwane abantu abasha nabampofu kodwa abanamakhono. Sikhuluma isiqinisekiso uhulumeni abafundi abathola loans student uma kwenzeka-non-refoulement lapho ukulahleka yebhange ngokwengxenye ihlawulelwa kusukela isabelomali sikahulumeni (mayelana 10% lemali).
Yiziphi izimo zohlelo ukuthola imali-mboleko yendlu zemfundo isivumelwano sesiqinisekiso isimo? Esikhathini isicelo ukuba ngcono ngokwezinga elithile iziqu kungenzeka ukusebenzisa credit zemfundo ezimvunayo - yesikweletu ku loan akudingeki akhokhe ngesikhathi cwaningo kanye ezinyangeni ezintathu ngemuva kokuthola izitifiketi kubahlanganyeli isilingo. Eminyakeni emibili ezayo kuyadingeka ukukhokha inani inani lenzalo kanye iminyaka engu-10 ukuba abuyisele uthishanhloko loan. Izinhlawulo zakuqala buyiselo imalimboleko singanikezwanga. Yisiboniso umboleki yisimo, okuyinto subsidizes zenzalo sokubolekwayo umfundi. Ngenxa yalesi ayidluli 5,0625% ngonyaka.
Ngubani ongathola ukuboleka imali yemfundo ku lafana? Izenzo isimo njengoba guarantor intsha abaneminyaka 14 kuya 18 iminyaka, manje abafundi kusukela engu-18 kuya ku-21 kufanele amathuba enkulu yokuthola uxhaso ezinjalo.
Ngaphezu kwalokho, ukuze zifaneleke iqhaza kuhlelo isimo loans student, kumele ube umlando omuhle zezemfundo. Okokuqala isimo isekela ochwepheshe ikusasa iphrofayli adingwa wumnotho kazwelonke. Ngokwesibonelo, manje kakhulu ziphoqa ngokuya ososayensi uhulumeni, ochwepheshe kanye nabamele ukuzibonakalisa ukusebenzela eziyinkimbinkimbi kwezempi-industrial.
Ukuze uthole uhlelo isimo, umfundi kufanele bangena esivumelwaneni wesikweletu zemfundo ebhange iqhaza ekuhlolweni, futhi senze labo amanyuvesi ngawo basayina isivumelwano iphrojekthi. Minyaka yonke, uhlu lezikole siyashintsha. Kuyaphawuleka e ukuthi ezifakwe eziqinisekiswe kokubili amanyuvesi zomphakathi kanye nezizimele.
Kuze kube manje, uxhaso nesimo njengoba isinxephezelo for non-ukubuya yesikweletu ku loan ibuyiselwe kufike ku-20% we isamba kwezimali ukungazinaki, kanti u-75% izinga refinancing we Central Bank of Russia uya isinxephezelo kwehle imali.
By the way, inamathuba ukuboleka imali yemfundo kubantu abathola idiploma ye imfundo yesibili ngaphezulu, imali yabo futhi ubude inkonzo nomqashi efanayo izinyanga okungenani eziyisithupha impahla (imoto, ingcebo). Ngaphezu kwalokho, nomthelela omuhle isinqumo yebhange ngalokho abazali bakho - hhayi umhlalaphansi une guarantors, futhi yamapasi yakho ebuyekeziwe ngezikhathi ezithile. Futhi amathuba iqhaza yokwamukelwa ukuhlolwa amakhono ethandwa e eyunivesithi ephakemeko.
Kuyini pyrolysis? Ukuchaza umqondo yenqubo
Eukaryotes - kukhona eziphilayo kabani amaseli ane-nucleus
Kuyini River Falls umbuso wayo? Emthambekeni nokuwela imifula ngobukhulu emhlabeni
Indlela yokwenza massage mat izingane ngezandla zabo?
Ubani owasungula football?